Firenena Mikambana : Manohana sy manampy an’i Madagasikara hatrany -
AccueilRaharaham-pirenenaFirenena Mikambana : Manohana sy manampy an’i Madagasikara hatrany
Mandalo eto Madagasikara amin’izao fotoana izao ny talen’ny Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires des Nations Unies (OCHA), John Ging. Nialohan’ny nihaonany mivantana tamin’ny Filohan’ny Repoblika sy ny praiminisitra, nanatanteraka fitsidihana ny minisitry ny Raharaham-bahiny malagasy (MAE), Henry Rabary-Njaka, ny tenany, omaly.
Tamin’izany indrindra no nilazany fa manana tanjaka i Madagasikara ka rariny loatra raha tohanana sy hampiana. “Tonga eto Madagasikara ny tenako hidinika ny fomba hanamafisana ny fifandraisan’ny OCHA amin’ny governemanta malagasy sy ireo mpiara-miombon’antoka sy mpiara-miasa amin’ny fitantanana ny fiantraikan’ny loza voajanahary. Niresaka ny mahakasika ny fampandrosoana maharitra mifandraika amin’ny filàn’ny mponina ihany koa izahay. Noho izany indrindra, dia mila fanohanana i Madagasikara amin’ny fananany tanjaka eo amin’ny lafin’ny fambolena sy fiompiana, eo amin’ny tontolon’ny fizahantany ary indrindra fa ny fananany tanora maro. Mila manohana an’i Madagasikara ny Firenena Mikambana”, hoy i John Ging, talen’ny OCHA.
Nambaran’ny minisitry ny MAE, Henry Rabary-Njaka, kosa fa teo hatrany ny Firenena Mikambana nanohana sy nanampy an’i Madagasikra taorian’ireny fandalovan’ny rivodoza mitranga sy mandalo eto isan-taona ireny. Saika nahetsiny avokoa ireo sampandraharaha rehetra misy eo anivony.
Ankoatra izay, notsindrian’ny minisitra fa mila fandraisan’andraikitry ny tsirairay ihany koa ny fanajana ny tontolo iainana mba hampihenana ny fitrangan’ny loza voajanahary eto amin’ny firenena. “Aza hadinoina fa anisan’ireo firenena mpanorina sy nahitana ny Alliance Solaire, izay hiadiana amin’ny fiovaovan’ny toetr’andro. Noho izany, manentana ny mpiara-belona sy ny mpiray tanindrazana hatrany ny Fitondram-panjakana amin’ny fanajana tanteraka ny tontolo iainana”, hoy hatrany ny minisitra.